Sary Instagram Misy ireo Nahandro Japoney Mety Mbola Tsy Fantatrao · Global Voices teny Malagasy
Akoho manta, tsirinainan-trondro, aty manta ary "hena ravina serizy"
Voadika ny 27 Avrily 2017 4:38 GMT
Raha ho an'ny sasany ivelan'i Japana, mety hoe tahaka ny sakafo misy poizina izy ity, fikarakarana malaza ao Japana ny akoho manta. Sary avy amin'ny mpisera Flickr mio-spr.
Na dia mahafantatra ny sushi sy ny vomanga Japoney aza ny ankamaroan'ny olona, maro ireo sakafo hafa azo ianjoriahana ao Japana. Raha mitady sakafo vaovao sy mampientanentana tiana andramana ianao, manana maro atolotra i Japana…
Fon'akoho, taola-malemy, aty, haranana sy atody tsisy akorany
Mahazatra eny amin'ireo toeram-pisotroana toaka ao Japàna ny toeram-pisakafoanana manam-pahaizana manokana amin'ny nahandro yakitori (akoho atono) ary manome ohatra amin'ireo sakafo Japoney tsy dia misy mpihinana ivelan'ny firenena. Raha sakafo mahazatra ny tratran'akoho sy fen'akoho, misy ihany koa ireo faritra marobe hafa azo hanina amin'ny akoho. Ny fon'akoho sy ny haranany no tena malaza, tahaka ny taola-malemy ihany.
Fon'akoho natono. Nahandroina mandrapaha mikarepoka azy, noesorina ny menaka, ka mahatonga azy ireo ho maivamaivana!
Taola-malemy karaage (akoho nendasina hikarepoka)
Ny somary sarotsarotra hita dia ny tamahimo (玉ひも), atody kely tanatin'ny akoho, karakaraina miaraka amin'ny karazana tranon-jaza amin'ny akoho.
Mihinana Akoho Manta ao Japana
Akoho sashimi ao Korombia izakaya ao Sapporo, Japana. Eny, akoho MANTA izy ity.
Fantatra ao an-toerana ho torisashi (鶏 刺 し), fitambaran'ny voambolana tori midika hoe akoho sy sashimi midika hoe hena manta notetehina hita manerana ny toeram-pisakafoanana yakitori sy fisotroan-toaka manerana an'i Japana. Mahazatra indrindra ao amin'ny prefektioran'i Kagoshima, Miyazaki sy Oita izany, izay sakafo mampiavaka ny ao an-toerana.
Ny sashimi amin'ny akoho dia ahitana tratran'akoho, aty sy haranany. Matetika ampangotrahana na dorana mandrapaha fotsy ny eo ivelany, fa tsy hohanina manta tanteraka.
Ny mahavao haingana azy sy ny fahaizana mikarakara araka ny tokony izy no mampihena ny fanapoizinana ara-tsakafo avy amin'ny bakteria campylobacter ao anatin'ny akoho manta, saingy na eo aza izany, tranga fanapoizinana ara-tsakafo an-jatony maro avy amin'ny torisashi no voatatitra isan-taona, ary heverina fa maro kokoa ireo tranga mbola tsy voatatitra. Noho izany antony izany, notakian'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, ny Asa sy ny Fifanampiana ny tsy hihinanana akoho manta na zara raha nahandroina.
Tsy tahaka ny omby sy kisoa, tsy dia atahorana hahafaty ny akoho manta, saingy mety hitarika areti-kibo goavana sy fivalanana, ka tsara hatrany ny mitandrina. Midika izany fa Japoney maro no mihinana torisashi matetika kanefa tsy marary.
A post shared by Noriko_K 🔓⇔🔒🔑 (@noririn924) on Jan 2, 2017 at 4:49am PST
Deluxe #basashi #sakuraniku Tiako ny basashi! 🐴💕
Fantatra ho basashi (馬刺し) na sakura niku (桜肉, ara-bakiteny hoe “hena felana serizy”) noho ny lokony mavokely, mahazatra loatra manerana an'i Japana ny henan-tsoavaly. Hena mampiavaka an'i Kumamoto, no hohanina manta amin'ny ankapobeny, ary alona amin'ny saosy saozaha.
Ny Raiforo (anan-tsoavaly) dia hanitra malaza ampiarahana aminy (araka ny tokony ho ampy).
Horumon no tsara indrindra! #horumon […] #Kobuta Shokudo Restaurant
Ny taova anatin'ny kisoa sy ny ombivavy matetika dia hohanina atono na andrahoina anaty vilany mahamay. Amin'ny teny Japoney, antsoina hoe Horumon (ホ ル モ ン) izy ireo.
Misy ihany koa ny teoria sasany amin'ny fiavian'ity voambolana ity. Teoria malaza iray milaza fa avy amin'ny tenim-paritra Kansai horumon (放 る 物), midika hoe “entana nariana” izany, satria matetika ariana ireo faritra tsy ilaina amin'ny biby. Taorian'ny fiafaran ‘ny Ady Lehibe Faharoa, mponina Koreana ao Osaka, Hiroshima sy ny tanàna hafa tao amin'ny faritra andrefan'i Japana, mitady raharaham-barotra mora vidy mba hivelomana no nahita fomba hikarakarana sy hivarotana sakafo nariana.
Araka ny teoria hafa, avy amin'ny teny “hôrmônina” ny anarana, izay teny malaza taorian'ny ady tao Japana. Nitàna ny finoana ny olona fa ny taova ao anatin'ny biby, heverina ho manankarena hôrmônina, dia mampiakatra ny haavon-kery. Na dia amin'izao fotoana izao aza, manana ny lazany ho sakafo famerena-tanjaka ny horumon.
Omaly alina! nihinana aty manta aho! #Daishoukaku Restaurant #Kiyamachi […]
Ity sakafo manokana Japoney ity raha ny marina dia tsy ao anatin'ny sakafo, fara fahakeliny amin'ny fomba ofisialy, taorian'ny fampidirana ny fitsipika vaovao mandràra ny toeram-pisakafoanana tsy hikarakara azy. Voaràra tamin'ny taona 2012 ny atin'omby noho ny fahafatesana olona dimy tratran'ny fanapoizinana ara-tsakafo E. coli tamin'ny fihinanana henan'omby manta ratsy karakara, izay nitarika ny fiakaran'ny lazan'ny atin-kisoa, izay voaràra ihany koa tamin'ny taona 2015.
Namokatra safidy hafa, sakafo tsy misy hena vita amin'ny konnyakua ny orinasa maro, izay hita mazava fa mitovy amin'ny tena izy ny ivelany sy ny ao anatiny. Saingy araka ny filazan'ireo mpisakafo hariva sasany, tsy mitovy izany.
Noho izany, nihevitra ianao fa aty manta izany ? Eny mahagaga, tena #konnyaku izany! Vokatra vaovao avy amin'ny 7-Eleven. Nanandrana izany aho, ary tsara, konnyaku ilay izy! Jiggly joggly konnyaku!
Ny sashimi trozona nohaniko indray andro
Miala tsiny ry trozona, saingy manana tsiro tsara mampiavaka azy ity sashimi ity, sarotra ny mahazo azy tao amin'izao andro ankehitriny izao.
Nankafiziko tao amin'ny izakaya toeram-pisotroana tsy dia malaza antsoina hoe Nakameguro izany.
Efa nisy ny fotoana naha-sakafo iombonana azy, anisan'izany ny nanaovana azy ho sakafo antoandro any an-tsekoly, saika nanjavona teny amin'ny latabatra fisakafoanana hariva ny henan-trozona noho ny fitomboan'ny fihinanana azy any an-trano.
Henan-trozona amidy eny an-tsenan'ny fanomezana ao Nagasaki. Sary: Nevin Thompson..
Ireo zokiolona indray nihira izay nahatsiaro tsara ny fihinanana azy nandritra ny fahazazana no mbola mihinana henan-trozona .
Na dia eo aza ny fahavitsian'ny tinady, mbola hita foana eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe ny henan-trozona masaka sy ambifotsy, hita eny amin'ny trano fisakafoanana sasany ihany koa izy. Tokony omena toro-hevitra ireo mpisakafo harivariva, na dia izany aza, fa ny sakafo henan-trozona dia azo ampiarahana amin'ny silaka volavelona (merkiora).
Tiako ity! #shirako miaraka amin'ny ponzu #matsiro #mafilotra #ny tena tiako
Raha anisan'ny nahandro Japoney mahazatra ny atodin-trondro, ary eny, amin'ny nahandro hafa manerantany ihany koa, mahazatra ny mihinana taovam-pananahan'ny trondro lahy ao Japana. Fantatra amin'ny anarana hoe shirako (白子, ara-bakiteny “ankizy fotsy”), karakaraina miaraka amin'ny fonony (membrane) ity sakafo ity ary azo hanina manta na masaka. Matetika ampiarahana amin'ny saosy ponzu, afangaro sushi mahazatra ihany koa izany.
Matetika vokatra avy amin'ny lamoria ny Shirako, kanefa mety avy amin'ny trondro hafa ihany koa izy, tahaka ny Somao na pufferfish. Fantatra amin'ny fangarony maditidity mampiavaka azy, marobe izy rehefa amin'ny ririnina, rehefa amin'ny fotoanany.
Tsinaina Orita Masirasira
Tamin'ny farany teo, nivarotra izany tsirairay izahay, saingy nilaza taminay ny mpanjifa sasany fa te hividy azy io miaraka amin'ny trondro maina. Manome fitambarana shiokara sy trondro maina izahay ankehitriny! […]
Natao tamin'ny tsinay masirasira sy miteradroatra avy amin'ireo karazam-biby an-dranomasina isan-karazany (matetika ny angisy (kalmara) ), na dia ny ankamaroan'ny Japoney aza dia mihevitra fa somary manana tsiro miavaka ny shiokara (塩 辛). Matetika ankafizina ho fangaron-tsakafo ity nahandro masiatsiaka ity .
Mety tsy ankafiziko ny sasany amin'ireo nahandro ireo, saingy azo antoka fa mahaliana ny mahita izay mandrafitra ny sakafo matsiro ao anatin'ny kolontsaina samihafa.